Ekpere nye Saint Catherine nke Siena. ? Nchedo, Ikpe Ziri Ezi na Maka Ịhụnanya.
Ekpere Saint Catherine nke Siena nwere ọtụtụ ebumnuche.
A maara ya dị ka otu n'ime ndị dọkịta nke okwukwe Katọlik, ya mere ọ dị ike inyere anyị aka n'okwu ndị metụtara anụ ahụ, mmetụta uche na ahụike ime mmụọ.
Ọ bụ onye edemede na onye na-ekwusa okwu Chineke n'ụwa ma jiri obi ọma na-emeju obi ya niile n'ịhụnanya Chineke iji nyere ndị nọ na mkpa aka.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ bụrụla otu ndị nsọ na okwukwe Katọlik na-asọpụrụ karịa nke a bụ n'ihi oke ike ya na ọrụ ebube ndị ama ama.
1 Ekpere Saint Catherine nke Siena na-bụ Saint Catherine?
1.1 Ekpere Saint Catherine maka nchebe
1.2 Ekpere Saint Catherine maka ikpé ziri ezi
1.3 Ekpere Saint Catherine nke Alexandria maka ihunanya
1.4 Enweghi obi nkoropụ nke nwoke
2 Catherine nke Siena nwere ikike?
Ekpere Saint Catherine nke Siena na-bụ Saint Catherine?
Amụrụ n’ime ezinụlọ buru ibu, bụrụ nwa nwanyị nke 23 nke alụm.
Ha sitere na ụlọ akwụkwọ dị ala nke na-ekweghị ka ọ gụọ ezigbo agụmakwụkwọ, n'agbanyeghị mgbe ọ dị afọ 7 o kpebiri itinye onwe ya na nkwanye ugwu ma mezuo ọgbụgba ndụ dị ọcha nke o mezuru rue mgbe ụbọchị ikpeazụ ya.
Ọ dịrị ndụ ruo afọ 33 ma ọ bụ Nna Pius nke Abụọ onye kwupụtara ya Santa de ụlọ ụka Katọlik Eprel 29, 1461.
N'ime afọ ole na ole sochirinụ, ọ ghọrọ onye nsọ nke Italy, natara aha nke Dọkịta nke andka wee bụrụzie onye akpọrọ Patron Saints nke Europe.
Senti hapụrụ akwụkwọ ederede dị mkpa nke rue taa bụ nke a na-ewere otu n'ime ọrụ kacha mkpa nke ụka Katọlik.
Ekpere Saint Catherine maka nchebe
Oh mma nwanyị na-amaghị nwoke nke Catherine nke Siena nke Chineke gọziri agọzi nke ukwuu!
Ngwa nke Onye kachasi ihe nile elu ka o me ihe ebube di iche iche, oriọna nke ulo uka, onye nwere onyinye n’enyeghi aka, nke umu agbogho ndi nwere ezi uche ma nwee obi ike nke paladins.
Gosipụta oke ike gị na-aga, ịgha mkpụrụ nke Chineke, na-enweta anyị niile ịnụ ọkụ n'obi iji gaa n'ihu na omume ọma nke ozioma, ọkachasị ịdị umeala n'obi, akọ, ndidi, obi oma na ịdị uchu n'ọrụ nke ọrụ steeti anyị.
Onye agọziri agọ nke ọma Onye-nwe-anyị, Onye nsọ C Saintine dị mma maka obi uto ahụ ị natara site n’inwe ike isonyere Chineke na ịdị nsọ ma na ị nwetara n’aka Ya amara nke inwe ike ime gị obi ụtọ site n’ịrụ ọrụ ebube gị na-aga n’ihu n’ọtụtụ ndị chọrọ ya, gee ntị n’arịrịọ umeala n’obi m ma rute m maka Gooddị mma nke Chi gị na - enyere gị aka ngwa ngwa na ndụ m, na ezinụlọ m, n'ụlọ m:
Were aka m jidere m na nsogbu m, wee were ya gosi onyenwe anyi ya ka aga eleta ya ozugbo.
Ana m arịọkwa gị ka ị nye m nchedo na nchebe, na site n'i imomi omume ọma gị ka m ga-eto eto ihe ọmụma banyere ezi Chineke ahụ, wee nweta ezi ihe nke ndị a họọrọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nchebeNke a bụ ekpere ziri ezi nye Catherine nke Siena.
Santa Catalina dị ka onye na-elekọta Italytali na Europe nwere ike inye anyị nke ahụ nchebe nye anyị N'agbanyeghị ebe ị nọ n'ụwa.
Ihe ojoo na ike adighi nma Ha nọ na gburugburu ma na-eme ka ndị mmadụ jupụta n'okporo ụzọ ọjọọ ndị a iji mepụta ml, ọ bụ ya mere ekpere maka nchekwa ji dị oke mkpa ma bụrụkwa ndị a na-atụ aro ime ọbụlagodi ụbọchị.
N’ụtụtụ ụtụtụ na n ’ụlọ, ọ na-abụ ofufe ime mmụọ nke ga na-elekọta anyị ụbọchị niile n’ụbọchị.
Ekpere Saint Catherine maka ikpé ziri ezi
Oh my Santa Catalina, kedu ihe ndi agaghị ekwe omume ị rụzuru, ị bụ onye kachasị hụ n'anya ma hụkwa n'anya nke onye na-elekọta anyị, ana m arịọ maka enyemaka gị ka ị weghachite olileanya m niile ...
A na m arịọ gị nnukwu enyemaka nke mere na Chineke n’etiti obi m na nwa ya, Jizọs, na ndị dị njikere ịkasi m obi, a na m akpọku gị ndị dị njikere imeghe aka gị iji gbaa m ume ma nye m ahụ efe na ngwọta mgbe ihe ọ bụla yiri ka ọ ga-efu.
Saint Catherine, nwanyị na-amaghị nwoke dị ebube nke juputara na ịhụnanya, taa, ebili m na-achọ nchebe gị nke eluigwe, n'ihi na abụghị m ihe ọ bụla na-enweghị nkwado gị na nke Chineke.
Nwanyị m mara mma ma na-adọrọ adọrọ, ụfụ pụrụ iche nke dị n'ebe dị elu, na-eji ya mee ka ụzọ m dị ọcha.
Kasie m obi ma nyere m aka belata ihe mgbu m na-ebu na mkpụrụ obi m.
M na-arịọ nnukwu obi gị ka ị nụrụ ịnụ arịrịọ m.
My nsọ nsọ Catherine dị ọcha ma gọzie maka ike a na - akparaghị ókè nke Chineke nyere gị, a na m arịọ gị ka i jiri obi umeala nyere m aka gị na mgbakwunye nke ihe isi ike a, na enwere m olile-anya na etinye m n’aka gị dị mma ma gọzie.
(kedu ihe ịchọrọ inweta)
Ana m ekele gị oge niile maka ịge ntị n'arịrịọ m, n'ihi na ejiri m n'aka na ị nụla ekpere m, ọ bụ ezie na ọ na-esiri gị ike idozi, enwere m nchekwa otu mgbe n'aka gị, ọ ga-emezu nke a, ebe ọ bụ na onweghị onye na-emechu gị ihu mgbe niile. rịọ maka ihu ọma gị, na agbanyeghi ike ha.
Gi Saint Catherine di ngozi, gi onye na - ario aririo a na - apughi ime, kpekuo Chineke ekpere maka nkpa m na nwute, a na m eweghachi olile anya m n’ekpere a, m tukwasiri obi na nchedo gi mgbe niile.
Katalina m hụrụ n'anya gọziri ndụ m, akwụsịkwala iduzi m n'ụzọ dị iche iche.
M ga-esoro gị n'okwukwe, obi umeala na nraranye gị.
Nke a bụ etu o siri dị. Ka ọ dịrị. Ka ọ dịrị. Ọ ga-adị otú ahụ.
Kpee ekpere Saint Catherine maka Ikpe Ziri Ezi n'oge nsogbu.
Kemgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ nwere ihe isi ike n'ihi ịbụ onye obere ọkwa na nke nnukwu ezinụlọ.
Mara nke ọma ihe ị ga - enweta ihe isi ike nke bụrụ ikpe na-ezighi ezi n'anya Chineke, ọ bụ ya mere ndị aka anyị ga-eji bụrụ onye anyị nwere ike ịtụkwasị obi nyere anyị aka n'okwu ndị metụtara ikpere ikpe ziri ezi n'ụwa ma ọ bụ nke mmụọ.
Ekpere Saint Catherine nke Alexandria maka ihunanya
Santa Katalina gị onye nwere ike ime ka ọtụtụ mmadụ kpezie ...
Meere m obere ihe ọma, chọta ịhụnanya, mee ka obi m dị mma ma bụrụ eziokwu, nke ahụ na-eme ịhụnanya, n’ime obi m nwere ike ịbanye ma jupụta m n’obi ụtọ.
Achọrọ m inwe ike ịma ezi ịhụnanya, ezigbo mmetụta, Santa Katalina gị onye nwere ike dị ukwuu na ya ...
Nye m amara ahụ, ka arịrịọ m bịakwute gị, ka m wee nweta ngọzi gị, Saint Catherine hụrụ n'anya, ịhụnanya zuru oke yana enweghị ụgha, gị ndị nwere omume ọma na ihe niile kwupụtara ụwa dum.
Jekwuru m ma nye m ohere inweta ngozi gi, achoro m ka ị zilaghachi ekpere m.
Ekpere m n’ekpere Chukwu ka O mee ka ndụ m jupụta n’ịhụnanya, jupụta n’udo, ị ga-eme ya Santa Sata Katalina n’ụzọ ọrụ ebube ...
A na m arịọ gị ka ị nye m ịhụnanya, ịhụnanya karịa na ịhụnanya karịa, ọ joyụ, oke ọ joyụ, ezi ọchịchọ, ezi echiche, omume ọma, nyere m aka ime nke ọma na ya, ịhụnanya ga-adịrị m ka nzọ ụkwụ, ụzọ ...
Saint Catherine, gi onye n’eme ihe nile, nyem aka ma nwe ezi mmetụta nke ihunanya bịakwute m, tụkwasị obi n'ike gị na ịdị mma gị.
Kwesịrị iji dochie aha onye ahụ a hụrụ n'anya n’ekpere maka Saint Catherine nke Aleksandria maka ịhụnanya.
Amara dịka onye nlekọta nke ụmụ nwanyị ahụ ha enweghi mmekọ ihunanya, ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ.
Na ndụ o nwere oke amamihe, obi ike, ume, aghụghọ na ọgụgụ isi. O nwere ihe niile ịchọrọ iji nyere anyị aka dị mkpa n'ihe gbasara mmụọ.
O nwere ike inyere anyị aka ịgafe onye ahụ nke chọrọ ịlụ anyị, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ ga - enyere anyị aka ime ka anyị na ibe anyị dịrị n'otu ebe ọ nọ n'ịhụnanya.
Anyị ga-akpali kwupụta ekpere ka obi nkoropụ nke Santa Catalina de Siena.
Enweghi obi nkoropụ nke nwoke
Saint Catherine m di ngozi,
Who mara mma dịka Anyanwu, mara mma dị ka la luna, mara mma dika kpakpando.
Na i batara n’ụlọ Abraham, wee merie puku mmadụ iri ise, nke obi ike dịka ọdụm, mee ka obi m dị nro (kpọọ aha onye ahụ).
(Kwuo aha onye ahu) mgbe ọ hụrụ m, ọ ga-esi n'ụzọ ya gafere m, ọ bụrụ na ọ na-arahụ ụra, ọ gaghị ehi ụra, ọ bụrụ na ọ na-eri ihe, ọ gaghị eri.
Ọ gaghị enwe udo ma ọ bụrụ na ọ bịaghị ịgwa m okwu.
Ọ ga-etiku m, n’ihi m, ọ ga-asụ ude, dị ka Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na nwa agbọghọ ahụ di ya nwụrụ.
(Kwu aha onye ahu ugboro atọ, na-akụda ụkwụ aka ekpe n'elu ala),
N’okpuru ụkwụ aka ekpe m nwere gị ma jiri mkpụrụ okwu atọ, ma ọ bụ jiri okwu anọ, ma ọ bụ jiri obi gị.
Ọ bụrụ n’ịrahụ ụra, ị gaghị ehi ụra, ọ bụrụ na iri nri, ị gaghị eri nri, ị gaghị anọ ọdụ ma ọ bụrụhaala na mụ esoghị m kwuo okwu wee gwa m na ị hụrụ m n'anya, ma nye m ihe ọma niile ị nwere.
Will ga-ahụ m n'anya n'etiti ụmụ nwanyị niile nọ n'ụwa, m ga-egosi gị mgbe niile ọmarịcha okooko osisi ọhụrụ.
Ichere, ekpere a nke St. Catherine iji mee ka obi nkoropu nke nwoke bu oru ebube!
Nke a ekpere Ọ bụghị ngwa eji emegharị ndị mmadụ ihe n'ebughị ọchịchọ ha, n'ụzọ nke ọ bụrụ omume nke ihunanya na okwukwe nke si n’eluigwe gọzie ihe anyị na-akpacha akpọnwụ na omume anyị.
Nwoke ahụ hapụrụ ụlọ, onye kpebiri hapụ ụlọ ma ọ bụ mmekọrịta ịhụnanya Ọ pụrụ ịlaghachi n ’enweghị olileanya inweta ihe ọ hapụrụ ọzọ. Nke ahụ bụ isi ihe mere eji ekpe ekpere a.
Catherine nke Siena nwere ikike?
Mgbe obula inwere okwukwe o nwere ike inyere anyi aka n’agbanyeghi ọnọdụ anyi choro.
N’agbanyeghi etu ọnọdụ siri chọta anyị onwe anyị, anyị nwere ike jiri okwukwe kwenye mgbe niile na ọrụ ebube ahụ sitere na ekworo n’oge na-adịghị anya karịa ka anyị tụrụ anya.
Jiri nke a mgbe niile ike nke ekpere nye Saint Catherine nke Siena!
Ike na ọrụ ebube nye Santa Barbara
Ekpere siri ike nye Saint Helena